Sanadihii badnaa ee uu Fahad dhuumaalaysiga ku jiray - Soo Bandhigida Xaqiiqada
Fahad waxa uu soo tahriibay isaga oo 13 sano jir ah.
“Marnaba kuma fikirin in aan u soo tahriibo Yurub” ayuu yiri Fahad, oo maanta ah nin dhalinyaro ah oo labaateeyo ah. Isagoo ku dhashay kuna barbaaray magaalada Muqdisho.
‘Xiligan ujedaadayda waxay ahayd in aan naftayda kala cararo Muqdisho oo aan ka fogaado intii aan karo” ayuu yiri.
Muuqaalkaan hoose ayuu ku sharaxayaa sababtii uu uga soo baxsaday Somalia iyo sida uu ku bilowday safarkiisa.
Xiligii uu ku sugnaa Addis Ababa ayuu dhexgalay Soomaali qorsheynayay in ay u socdaalaan Yurub. Waxa uu xiriir la sameeyay qoyskiisa isagoo u sheegay qorshihiisa. Waalidkiisa si kala duwan ayay uga jawaabeen qorshaha, aabihiis waxa uu doonayay in uu si degdeg ah ku soo laabto, balse hooyadiis oo fahantahay xaaladiisa – ayaa u dirtay lacagtii u suurto galin lahayd tahriibka.
Isaga oo xoogaa lacag jeebka ku wata, ayuu Fahad waxa uu visa baasaboorkiisa Soomaaliga ah kaga dhufsaday safaarada Sudan isagoo u safray Khartoum. Afar maalmood ayuu halkaasi joogay, isagoo uga sii gudbay safarka adag ee saxaraha. Subaxii la baxayay waxa uu la safray koox isugu jidha Soomaali, Sudanese iyo Eritrean iyaga oo saaran baabuur xamuul oo ku wajahan xuduuda Libya. Xuduuda waxay ku wareegeen baabuur kale, iyadoo markaas ay darawaladu ku hubaysnaayeen qoryo iyo midiyo. Fahad waxa uu ku bixiyay 500USD safarka Libya. Safarkaas oo qaatay shan maalmood.
Intii ay wadada ku jireen ayaa darawlada hubaysan waxay bilaabeen in ay dadka lacag waydiistaan. Waxay ku hanjabeen in ay ka tagi doonaan kuwa aan lacagta bixin. Fahad iyo Soomaalida kale waxay ku adkaysteen in aysan haysan lacag kale. Muran dheer ayaa dhexmaray, ilaa uu hadalka ka qasay baabuur jiib ah oo ay wateen ciidanka Libya kaasoo ku raadjoogay isaga oo xabad ridaya. Labo qof ayaa xabad uga dhacday garbaha iyo dhabarka. Ugu dambeyntii baabuurkii uu saarnaa Fahad xawaaraha ayuu kordhiyay oo waa ka baxsaday. Dhaawicii waxaa hospitaal la geeyay ku yaala Kufra iyagoo safarkoodii sii watay habeenkii.
Baabuurkii la saaray Fahad iyo 74 kale oo Soomaali ayaa lagu daboolay shiraac. Taasi oo ka dhigtay mid adag in la neefsado isaga oo aad u kululaaday. Intii lagu jiray safarka, haweeney uur leh ayaa neeftu ku dhagtay oo geeriyootay maadaama aysan helin hawo iyo kuleylka badan awgiis. Sida in uusan dhib ku yarayn, si lama filaan ah ayaa intii ay safarka ku jireen waxaa baabuurkii isku wareejiyay koox burcad Libyan ah kuwaasoo afduubtay ka dibna ku xiray Kufra. Fahad ayaa xabsi ku jiray 2 bilood taasoo u dhigantay 200 sano. Lixdii bilood ee ku xigtay waxaa lagu kala wareejiyay labo xabsi oo ku kala yaala Ijdabiya iyo Benghazi.
Halkaan Fahad waxa uu kaga hadlayaa qiyasadii xabsiga sideeda bilood.
Ka dib lix bilood markii uu ku jiray xabsiga Benghazi, ayaa waardiye uu Fahad saaxiib la noqday u soo bandhigay in uu bixiyo 600 USD ka dibna uu sii daynayo. Nasiib daro, waxaa lagu qabtay degmada Zlitan isagoo la xiray labo isbuuc. Ka dib markii la sii daayay waxa uu tagay Tripoli isaga oo la noolaa adeerkiis isla markaana ka shaqaynayay garaash.
Tani waxay ahayd horumar xaga nolosha ah, maadaama uu awooday in uu lacag meel dhigto si uu u sii wato safirkiisa. “Xiligaas waxaan diyaar u ahaa qatar kasta si aan Yurub u gaaro” ayuu yiri.
Maalintii loo baxayay safarka badda, Fahad iyo 28 qof oo kale ayaa fuulay doon. Ninkii loo xilsaaray in uu kexeeyo doonta ayaa been ka sheegay xirfadiisa si uu bilaash ugu raaco doonta. Iyadoo lagu jiro badda ayaa waxaa abuurmay muran baddan ka dib markii ay cadaatay in uusan aqoon sida loo kexeeyo doonta. Nasiib wanaag, doontu waxay si amaan ah u soo gaadhay Malta. Waqtigaas oo ahayd bishii August 2008.
Markii ay soo gaareen Malta, Fahad iyo dadkii kale waxaa lagu xiray goob ay ku sugnaayeen lix bilood. Waxa uu si dhaqsi ah ula kulmay xaqiiqada taasoo aad uga duwanayd sidii uu moodayay. “Markii la I soo daayay waxaan moodayay in ay meel wanaagsan I gayn doonaan, oo shaqo I siin doonan, balse maya, waxay I geeyeen xero teendhooyin ah”. Waxaa la siiyay sharci degenaansho, isagoo helay shaqo aan toos ahayn, laakiin uma suurto galin in uu sii wato waxbarashadiisa, taasoo uu aad u doonayay. Fahad waxa uu go’aansaday in uu safarkiisa u sii wato dhinaca waqooyiga. Taasi oo ahayd bilowga sadex sano oo uu ku noolaa nolol adag gudaha Yurub ila uu helay sharciga bishii May 2015.
Dhagayso qisada Fahad.
Taariikhda wareysiga: 13 April 2016 | Taariikhda la badalay: 15 April 2016 |
Neef ku xiran
Safarkii aan la hilmaami karin